रामकृष्णको ‘विश्वास’- अन्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — डा. रामकृष्ण निरौला गायक छविसाथ अघि आएका छन् । अस्ट्रेलियालाई कर्मभूमि बनाउँदै आएका उनले ‘विश्वास’ बोलको गीत श्रोतामाझ ल्याएका छन् ।
त्यसको म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ । रोमान्टिक भावको गीतले भन्छ
विश्वासमै चल्छ संसार
तिमीलाई थाहा छैन र
किन यति शंका ममाथि
म तिम्रै हैन र ?
डा. भोला रिजालले लेखेको गीत गायक/संगीतकार नरहरि प्रेमीले संगीतबद्ध गरेका हुन् । संगीत संयोजन पनि नरहरिकै हो । आरसी थापा निर्देशित म्युजिक भिडियोमा अभिनेत्री केकी अधिकारी, आरसी र सोन्हार श्रेष्ठको अभिनय हेर्न सकिन्छ । अस्ट्रेलियामा छायांकन गरिएको भिडियो विदुर क्षेत्री र निज्मा केसीले खिचेका हुन् । सम्पादन निज्माको हो ।
‘महिला–पुरुष सम्बन्ध विश्वासका आधारमा सुदृढ हुँदै जाने हो,’ नरहरिले भने, ‘अचेल ससाना कुरामा पनि विश्वासको पर्खाल भत्किन थालेको छ । गीतमा यही विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १७:१०
हुवावेले रुसमा ५ जी नेटवर्क विस्तार गर्ने
काठमाडौँ — सुरक्षा खतरा औँल्याउँदै अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेले रुसमा ५ जी नेटवर्क विस्तार गर्ने भएको छ । हुवावेले रुसी टेलिकम कम्पनी एमटीएसबीसँग अर्को वर्ष ५ जी विस्तार गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको रुस भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको उपस्थितीमा ती संस्थाका अधिकारीहरुले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षार गरेका थिए।
हुवावेसँगको सम्झौताले रुसमा ५जी प्रविधिको विकासमा सघाउ पुर्‍याउने एमटीएसले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। हुवावेकाउपाध्यक्षग्यो पिङले एमटीएससँगको सम्झौताले रणनीतिक महत्व बोकेको ५जीले महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने बताए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध झन् ठुलो हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलेबताउँदै आएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले हुवावेका उपकरणहरूले सूचना चोर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
ट्रम्पको उक्त निर्णयपछि गुगलले हुवावेसँग दूरी बढाउँदै हुवावेका स्मार्ट फोनहरूमा आफ्नो एप्स प्रयोग नगर्नेउल्लेख गरिसकेको छ।
यसैबीच चीन सरकारले विभिन्न ४ वटा कम्पनीलाई ५ जी नेटवर्क विस्तारका लागि अनुमति दिएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।
प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ १७:०८